iOS 8 Widget and Extension
iOS 8 widget and extension အ​ကြောင်း
WWDC 2014 မှာ Developer တွေ လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် တော်တော်လမ်းစ ပွင့်သွားပါတယ်။ Apple အနေနဲ့ App တွေကို ထိန်းချုပ်ထားတာတွေ လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုလျှော့ချလာတယ်ဆိုတာကို ios7တွင် သတိထားနိုင်ပါတယ်။ iOS7မှာ Background App Refresh ကိုစတင် မိတ်ဆက်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ Background App Refresh ဆိုတာ Facebook တို့လို App တွေကို အသုံးပြုသူက မနက် ၇နာရီလောက်တွင် ကြည့်နေကြဆိုရင် အဲဒီမနက် ၇နာရီမတိုင်ခင် Content တွေကို ကြိုတင် Download ထားတာမျိုးပါ။ အဲ့တော့ App လဲဖွင့်ရော user အနေနဲ့ နောက်ဆုံး content တွေကို ချက်ချင်းဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိလိုက်တာက အဲလို feature မျိုးက Widget/Extension တွေအတွက် အဓိက အသုံးဝင်လာနိုင်မယ်လို့ မထင်ထားတာပါ။ Apple က iOS 8 မှာ Widget/Extension ပါလာမယ်ဆိုတာ iOS7မှာ Hint ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလ Article တွင် Widget/Extension ဆိုတာ ဘာတွေလဲဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ App တွေမှာဘာတွေ develop လုပ်ဖို့လမ်းပွင့်သွားလဲဆိုတာ ဖော်ပြသွားပါမယ်။
အရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ iOS ပေါ်မှာ program ရေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို App လို့ခေါ်ပါတယ်။ App တွေက screen တစ်ခုလုံးမှာနေရာယူမယ့် program တွေပါ။ (New iPad Air မှာ Multi-Screen support ပါလာရင်တော့ 1/2 1/3 1/4 နေရာယူမယ်ထင်ပါတယ်). App တွေကို user တွေက App Store ပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက် download နိုင်ပါတယ်။
Extension ဆိုတာက ကပ်ပါး program လေးတွေလို့ခေါ်ရင် ကောင်းမလားမသိဘူး။ သူတို့တွေကို App တစ်ခုရေးပြီးမှ ယင်း App ကနေ extend လုပ်ယူရတာပါ။ Extension ကြီးပဲရေးလို့မရသလို App Store ကနေ Extensionကြီးပဲ download လို့မရပါ (နောက်ပိုင်း App Store မှာ new category အနေနဲ့ App with Extension ဆိုပြီးပါလာရင်တော့ ရှာရတာလွယ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဘယ် App က extension support လုပ်တယ်ဆိုတာ သိဖို့သိပ်မလွယ်လောက်ပါ). App တစ်ခုဖျက်လိုက်ရင် ယင်း extension လည်း ပျက်သွားပါတယ်။
WWDC 2014 မှာ extension ခုနှစ်မျိုးကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့
Today (iOS aand OS X)
Share (iOS aand OS X)
Action (iOS aand OS X)
Today extension တွေကိုတော့ iOS 8 တွင်Notification Center မှာပဲမြင်ရမှာပါ။ Android မှာဆိုရင်တော့ Home Screen ပေါ်မှာပါမြင်ရနိုုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး သတင်း တွေကြည့်လို့ရမယ်။ ebay တို့လို App ဆိုရင် App ထဲသွားစရာမလိုတော့ဘဲ notification center မှာတင် bid လို့ရမယ်။ ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ navigation app (gothere.sg app) တွေဆိုရင် ဒီနေရာမှာတင် နောက်တစ်ဆင့်က ဘယ် bus စီးရမလဲဆိုတာမျိုးတွေ ပြလာနိုင်ပါတယ်။
Share extension လိုမျိုး feature မျိုးကို facebook တို့ Twitter တို့လို App တွေမှာ တွေ့ပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီ App တွေက Apple ကနေ default သဘောမျိုးထည့်ပေးထားတဲ့ feature တွေပါ။ ဆိုကြပါစို့။ ခုလက်ရှိ မြန််မာ social app http://pyaw.co ကို ဓါတ်ပုံ share ချင်တယ်ဆိုရင် သူ့ App ကိုသွားပြီးမှ share နိုင်မှာပါ။ အခု iOS 8 မှာဆိုရင် instagram တို့လို photo editing app တွေကနေ တခြား social app တွေဆီကို direct share လာနိုင်ပါပြီ။
Action extension ကတော့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ feature ပါ။ WWDC 2014 မှာတော့ action extension အနေနဲ့ Safari ကနေ Bing translate သုံးပြီး ဘာသာပြန်ပြသွားပါတယ်။ Action extension အနေနဲ့ ဘာလုပ်ပြနိုင်လဲဆိုတော့ တခြား App က content (image or text) တွေကို သူက edit လှမ်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Edit လုပ်ပြီးသား content တွေကို ပြန်ပြီးအဲဒီApp တွေထဲမှာတင် save/view လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ email ပို့တဲ့အခါ ဓါတ်ပုံပေါ်မှာ စာလေးရေးချင်တယ် ပုံလေးဆွဲချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ extension support လုပ်တဲ့ app မျိုးကိုသုံးပြီးလုပ်လာနိုင်ပါပြီ။
Photo Editing extension ကတော့ အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ Apple ရဲ့ Photo App ထဲနေ ပုံတွေကို ပြင်လာနိုင်မှာပါ။ ပုံတွေပြင်ပြီးရင် ပြင်ပြီးသားပုံရော မူလပုံရောကို ပြန်ကြည့်လို့ရမှာပါ။ ဒီ extension ရဲ့ အဓိက function က ပုံတွေပြင်ဖို့အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ share တဲ့ feature မျိုးတွေပါ ပါချင်ရင်တော့ developer တွေအနေနဲ့ ဒီ extension ကို မသုံးသင့်ပါဘူး။
Finder Sync (OS X) extension ကိုတော့ OS X တွေမှာ တွေ့ရမှာပါ။ Mac ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ dropbox တို့သုံးဖူးကြမှာပါ။ အဲမှာ custom icon တွေ သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင် Finder ကို Reverse Engineerလုပ်မှရမှာပါ။ အခုဆိုရင် web content တွေကို Finder ထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ Sync သွားနိုင်ပါပြီ။
Storage Provider extension တွေကတော့ document တွေကို App တစ်ခုကနေတစ်ခုကို လွယ်လွယ်ကူကူ ပေးနိုင်ဖို့ပါ။ နမူနာအနေနဲ့ဆိုရင် ဆယ်တန်းမေးခွန်းတွေကို iOS storage provider app အနေနဲ့ရေးတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။ အဲဒါဆိုရင် ဒဂုံတစ်ကျောင်းကနေ သူတို့ကျောင်းသားတွေ ဖြေဖို့အတွက် App တစ်ခုရေးတယ်။ လသာ ၁ ကလည်း သူတို့မှာ App တစ်ခုရှိတယ်။ တခြားကျောင်းတွေမှာလည်း App ကိုဆီရှိကြတယ်ပေါ့ ။ အဲဒါဆိုရင် ဖြေဖို့အချိန်တန်ရင် iOS storage provider app အနေနဲ့ တခြား app တွေကို သူ့ဆီကနေ မေးခွန်း retrieve ဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စကားမစပ် iOS7ကနေစပြီး Single App Mode ကို Apple ဆီမှာ register နိုင်ပါတယ်။ Single App Mode ကို developer အနေနဲ့ enable လိုက်မယ်ဆိုရင် အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ တခြား app တွေကို သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ စာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါ တခြား app တွေဖွင့်ပြီး အဖြေကြည့်လို့မရတော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ကတော့ အင်မတန် hot topic ဖြစ်နေတဲ့ custom keyboard ပါ။ ခု iOS 8 တွင် developer များရဲ့ custom keyboard ကို app အတွင်းသာမက system တစ်ခုလုံးမှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဆိုလိုတာက facebook တို့လို app ထဲမှာပါ မြန်မာလိုရိုက်နိုင်ပါပြီ။ နာမည်ကြီး company တွေဖြစ်တဲ့ fleksyနဲ့ Swiftkey တို့ကလည်း iOS အတွက် custom keyboard များထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Developer များအနေနဲ့ သတိထားစရာတစ်ခုကတော့ သုံးစွဲမယ့် user တွေကို မိမိတို့ keyboard က key logger တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာပါ။ အခုလက်ရှိမှာတော့ Apple အနေနဲ့ အဲဒီအကြောင်းကို အသေးစိတ် မရှင်းပြသေးဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒီ feature ကိုပဲတွေ့မိပါတယ်။ Developer များအနေနဲ့ မလိုအပ်ပဲ RequestsOpenAccess ကို မသုံးဖို့ Apple ကနေ recommand ထားပါတယ်။ အဲဒါသုံးမယ်ဆိုရင် keyboard သုံးနေရင်းနဲ့ network access ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ user ကို ဘယ်လို trust ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာ App များမှာ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ extension များကို ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ App တွေမှာဘယ်လို extension တွေပါလာနိုင်လဲ
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Today extension နဲ့စပါမယ်။
Today Extension for Myanmar App
Myanmar Currency App (Kyat, KCurrency) နောက်ဆုံး ဒေါ်လာပေါက်ဈေးတွေကို notificaton center မှာပြထားနိုင်ပါတယ်။ Cache နဲ့ အရင် data တွေကို သိမ်းထားဖို့တော့လိုပါမယ်။ ဒါမှ notification center မှာ data တွေ refresh မဖြစ်ခင် အရင် data နဲ့ပြနိုင်မှာပါ။
Myanmar News App (Easy News – Myanmar, Soccer Myanmar, NSMag, MMSpeaker) နောက်ဆုံး သတင်းထူးတွေ၊ user subscribe လုပ်ထားတဲ့ သတင်းများကို notification center မှာပြနိုင်ပါတယ်။
Myanmar Bay Din ( Kg Lay Bay Din ) ဗေဒင် app များလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ ကြည့်လာနိုင်မှာပါ။ တနင်္လာနေ့ရောက်ရင် အဲဒီနေ့အတွက် အတိုချုပ်ကို notificaton center မှာကြည့်နိုင်ရင် တော်တော်အသုံးတည့်မှာပါ။
Myanmar Calender (Ywat Sote) မြန်မာ ပြက္ခဒိန် များကို notification center မှာ ပြဿဒါးနေ့ဆို ပြဿဒါး၊ ရက်ရာဇာဆို ရက်ရာဇာ ကြည့်လာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။
Share Extension, Photo Editing, Storage Provider Extension for Myanmar App
မြန်မာ app တွေမှာ ဒီနှစ်အတွင်း မတွေ့နိုင်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ Storage Provider အနေနဲ့ကတော့ Myanmar Magazine များမှာ သုံးမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။
Action Extension for Myanmar App
Myanmar Reader (Mogok) Safari ကနေ Bing translate လိုမျိုး ပြထားတဲ့ content ကနေ zawgyi font embedd လုပ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မာစာတွေ ဖတ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
Myanmar Dictionary (Ornagai 2, Shweyoe) Safari ကဖြစ်စေ တခြား App ကဖြစ်စေ select မှတ်ထားတဲ့ English text ကို မြန်မာလို တန်းကြည့်နိုင်တဲ့ Dictionary လုပ်မယ်ဆိုရင် App ကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် ဒုက္ခကင်းဝေးသွားမှာပါ။
Myanmar Keyboard ( Sar ,Write Myanmar, PayHlwar) တို့မှာ custom keyboard extension များ ထည့်သွင်းလာနိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ တခြား new app များအနေနဲ့ တွေ့လာနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ သာမန်ရေးဖို့ဆိုလျှင် free ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပြီး တခြား special feature များကိုတော့ In-app-purchase ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Network Access ကိုဖွင့်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် Ads များမထည့်သွင်းသင့်ပါ။